कोर्स कभर गर्न पिरियड लम्ब्याउँदै विद्यालय समय थप्ने – Gurukul Khabar
कोर्स कभर गर्न पिरियड लम्ब्याउँदै विद्यालय समय थप्ने
गुरुकुल खबर २०७७, ९ असार मंगलवार १५:४८
शिक्षक, एम्राल्ड स्कुल, लगनखेल
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लडडाउनका कारण धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका छन । ती मध्ये शिक्षा क्षेत्र एक हो । शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरले शैक्षिक प्रणाली, सिकाइ उपलब्धिदेखि विद्यार्थी र शिक्षकको मनोविज्ञान समेत प्रभावित हुने निश्चित छ । नेपालमा जुन बेला लकडाउन सुरु भयो, त्यतिबेला विद्यालयहरु अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा व्यस्त थिए । केही विद्यालयमा त परीक्षा समेत भएको थिएन । विद्यालयहरुले प्रविधि प्रयोग गरेर परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरे । अहिले प्रविधिकै प्रयोगबाट कक्षा संचालन भइरहेका छन ।
तर,लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरुमा अन्यौल बढेको छ । यो वर्ष कक्षा होला कि नहोला ? भए कहिलेदेखि होला ? जस्ता प्रश्नले उनीहरु चिन्तित छन । यो चिन्ताले उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन पर्न थालेको छ । उनीहरुमो चिन्तित मनस्थितिलाई सामान्य बनाउन अभिभावकको सल्लाह, सुझाव र परामर्श अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालयले लिने अनलाइन कक्षामा निरन्त बस्दा उनीहरुमा मानसिक रुपमा थकित भएका देखिन्छन् ।
अनलाइन क्लास, जुम क्लासका कारण विद्यार्थी प्रविधिमा धेरै अभ्यस्त भएका छन् । अनलाइन क्लासका नाममा उनीहरु लुकीपिछी युटुब धेरै चलाउने, म्यासेन्जरमा गफ गर्ने, फेसबुकमा बढी रमाउने समस्या देखिएको छ । यो लतले उनीहरुमा दीर्घकालीन असर पर्छ । विद्यालय सुरु भएपछि उनलाईलाई विद्यालय जान मन नलाग्न सक्छ । त्यसतर्फ विद्यार्थी र अभिभावक बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । प्रविधिमैत्री हुने नाममा लत बस्नु राम्रो कुरा होइन । यी त भए अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका कुरा ।
अहिले पनि धेरै विद्यार्थी यस्ता छन, जसको पहुँच इन्टरनेटमा छैन् । इन्टरनेट नहुने बित्तिकै अनलाइन कक्षा उनीहरुको लागि संभव भएन । गाउँबाट जसोतसो सहरमा आएर एउटै कोठाबाट गुजारा चलाईरहेका विद्यार्थीसँग इन्टरनेट अपेक्षा गर्नुपनि जायज हुँदैन । त्यसैले,अनलाईन कक्षा प्रभावकारी भएको पाइदैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले भर्खरै भर्चुअल कक्षा सुरु गरेको छ । रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउने गरी थालेको यो कक्षा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । यो प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण स्रोत साधानको उपलब्धता, अर्को शिक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु । प्रभावकारी शिक्षणको लागि कक्षा इन्टरएक्टिभ हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन् । शिक्षकहरु मात्रै एकहोरो बोलिरहँदा विद्यार्थीले पढाएको कुरा बुझेका छैनन् । उनीहरु कक्षामा बस्नको लागि मात्रै बसिरहेका छन् । भर्जुअल कक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यस सम्बन्धमा शिक्षाविद्हरुसँगको छलफल आयोजना गरेर परिष्किृत गर्नुपर्छ । विद्यार्थी जो अहिले एसइई परीक्षाको संघारमा छन् , उनीहरु चिन्तित छन् । आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा श्रेणीकरण गर्ने भनेपछि चिन्तित भएका हुन् । आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा अब्बल विद्यार्थीले मलाई अन्याय होला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो । यस तर्फ शिक्षक शिक्षिका अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ । आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा कसैलाई पनि अन्याय हुनु हुँदैन । यो त भयो एसइई दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीको कुरा ।
अन्य कक्षाका विद्यार्थीको पढाईलाई गर्न सरकारले जबदेखि विद्यालय सुरु गर्छ, त्यसपछि आउने सार्वजनिक बिदाहरु सबै कटौति गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण बिदा कटौति गर्दा यो वर्षको पढाई मेकअप गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी माथिल्ला कक्षा(आठ, नौ र दश) का विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाउने अवधि पनि बढाउनु पर्छ । बिहान सातबजेखि बेलुका पाँच बजेसम्म विद्यालयमै राखेर पढाउने हो भने कोर्स सक्न समस्या हुँदैन । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई लामो समय पढाउनुपर्ने कारण छन्, त्यो भनेको अर्को कक्षामा उक्लिदाँ विषयसँग अन्तरसम्बन्धित पाठहरु हुन्छन् । अघिल्लो कक्षाको पाठ नपठी माथिल्लो कक्षाको पाठ पढ्न बुझाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कोर्स सक्नको लागि विद्यालय खुले लगत्तै पिरियड लामो बनाउनुपर्छ । यसको साथसाथै विद्यार्थीले पनि पढाई मेरो लागि हो । मैले नै पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास गर्नुपर्छ । यसमा अभिभावकको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन अपिल